वर्षामा बग्ने पाटनको २ खोला | यल खबर
Home स्थानिय समाचार वर्षामा बग्ने पाटनको २ खोला
वर्षामा बग्ने पाटनको २ खोला
ठूलो वर्षापछिको सुन्दर पाटनको दृश्य त सबैले देखेकै होला। इन्द्रेणीको ७ रंगी र खुल्ला निलो आकाशमुनी पाटनको कृष्ण मन्दिरको फोटोमा ‘लब रियाक्ट’ त थुप्रैले गर्नेगर्दछौ। तर त्यसको केही समय अगाडीको पाटनको दृश्य भने किन नजरअन्दाज हुन्छ? किन सरोकारवालाहरु सम्म यो तस्बिर र गुनासो पुग्दैन?
हरेक वर्ष, वर्षा याममा, ठूलो पानी पर्ना साथ पाटनमा २ वटा खोला बग्ने गर्दछ। लगनखेल~ तंगल ~ मंगलबजार हुँदै बंगलामुखी बग्ने र ईति ~ ईखालुखु ~ माहापाल हुँदै बंगलामुखी बग्ने २ वटा खोला स्थानियको लागि कुनै नयाँ कुरा होईन। बगेको पानी व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न कार्य योजना बनेपनि खोला बग्न भने रोकेको छैन।
वडा कार्यालय , नगरपालिका, सरोकारवालाहरु र ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई जानकारी गराउदा पनि हाल सम्म समस्याको समाधान नभएको स्थानियहरुको गुनासो छ।
ठूलो वर्षा भएलगत्तै पाटनमा पानी जम्ने गर्दछ। पैदलयात्रुहरु हिड्नै नसकिने गरि पानी बग्ने गर्दछ। दुई पाँग्रे सवारी साधनको पनि आधा पांग्रा पानीमा डुब्ने गर्दछ। बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डीमा परि पैदलयात्रु र मोटरसाइकलहरु लड्ने गर्दछ। सदक छेउका व्यवसायिहरु भने पसलमा पानी पस्ने, गाडी वा मोटर्साइकल आगडिबाट जादा पानी छ्याप्ने तनाबमा हुन्छन।
वर्षा शुरु भएको केही समयमा बग्न थाल्ने खोलाले पानी मात्र नभई प्लाष्टिक, चाउचाउकको खोल, कागज, फोहोरको पोका र अरु थुप्रै कुरा बगाउदै ल्याउने गर्दछ। ती प्लाष्टिक र फोहोरहरु पानी बग्न बनाइएको ढलको पाइपमा अड्किने र जाम हुने गर्दछ। बगि आएको फोहोर विश्व सम्पदामा पर्ने पाटन दरबार क्षेत्रमा थुप्रीने गर्दछ।
यति मात्र नभई ढल जाम भएर माथी आउने र पानी संगै बग्ने हुँदा वातावरण प्रदुषण हुने र गनाउने गर्दछ।
Previous articleत्रि. वि. द्वारा अर्को सेमेष्टरका कक्षाहरु अन्लाईन मार्फत शुरु गर्ने निर्णय
Next articleजिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी ‘निषेधित गरिएका गतिविधिहरु’